Showing 73-84 of 110 results
FL Studio လေ့လာလိုသော Friends တို့ အတွက်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Linn Htut& Yan Naing Ling
ဂစ်​တာ ( Guitar Training )
Sai Lone Htaw
Free human resources management course in Myanmar Human Resource Management နှင့် ပက်သတ်ပြီ သိသင့်စရာများကိုစုစည်းတင်ပြထားပါသည်။ HR ဆိုတာကတော့ လူအင့်အားအရင်းအမြစ် လိုအဓိပ္ပာယ်ရပြီံHuman resource Management ဆိုတာကတော့ ဌာန သို့မပာုတ် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခု သို့မပာုတ် Company တစ်ခုခုမှာ အလုပ်လုပ်နေသော ၀န်ထမ်းများနှင့် ပတ်သတ်ပြီ စီးမံခန့်ခွဲမှုပြုလုပ်သော နည်းပညာတစ်ခုလိုပြောလိုရပါတယ်။ ကောင်းသော HR ကောင်းတစ်ရောက်ဖြစ်လာဖို့ဆိုလျှင် – – မှန်ကန်တဲ့ ၀န်ထမ်းရွေးချယ်ခန့် အပ်တာ – ၀န်ထမ်းတွေရဲ့ Performance တက်လာအောင် လေ့ကျင့်ပေးခြင်း – ၀န်ထမ်းတွေ အလုပ် ကျွမ်းကျင်အောင် တာဝန်ယူတာ – အချင်းချင်း ပြဿနာတက်ရင်ဖြေရှင်းပေးတာ –…
ထိုင်းဘာသာစကားကို လေ့လာကြမယ် Myanmar Best Online Courses
အခြေခံ PowerPoint tutorial videos များ… Thank you for having registered this “PowerPoint” lesson. The course basically aims to help students; especially those who have sort of difficulties to attend training class.
Adobe Pagemaker ကို Myanmar ဘာသာဖြင့် လေ့လာကြမယ်……